सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताहरुले चासो मात्रै कि लगानी पनि ? • Kalanga News
गृह/अर्थतन्त्र/सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताहरुले चासो मात्रै कि लगानी पनि ?
बझाङ : काठमाण्डौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सातवटा आयोजना लगानी सम्मेलनमा प्रवद्र्धन गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको चर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत अयोजना, सेती नदीकै पानी प्रयोग गरी बिजुली निकाल्न सकिने एसटी १ आयोजना, खप्तड केबुलकार परियोजना, सुदूरपश्चिम परिवहन, गोदावरी एग्रिकल्चर लगायत सातवटा आयोजनामा चीन, भारत, दक्षिण कोरिया र मकाउका लगानीकर्ताहरुले चासो राखेका छन् ।
लगानी सम्मेलनमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराकाअनुसार सम्मेलनमा विभिन्न आयोजनाहरुबारे गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनका प्रतिवेदनहरुका आधारमा छलफल भएको छ । लगानीकर्ताहरुको चासो सुदूरपश्चिम जलविद्युत आयोजनामा बढी छ ।
पश्चिम सेती र एसटी १ आयोजनामा विशेष रुपमा चीन र भारतका लगानीकर्ता आकर्षित भएको उनले बताए । यस्तै भारतीय लगानीकर्ताहरुले प्रदेश परिवहन सेवाबारे पनि चासो व्यक्त गरेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । मकाउ र दक्षिण कोरियाका लगानीकर्ताले भने कृषि र पर्यटनबारे चासो राखेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले समेटेका सात आयोजना बाहेक थप नौ आयोजना पनि लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको छ । यी नौ आयोजनाबारे जानकारी दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारीपत्र समेत प्रकाशन गरेको छ ।